Ny Nazca Lines, harena any Peroa | Vaovao momba ny dia
Ny Nazca Lines, harena any Peroa
Mariela Carril | | Peru
Iray amin'ireo harena ara-kolotsaina any Però ny Nazca Lines. Nahaliana ahy izy ireo hatramin'ny fahazazako satria misolo tena izy ireo mistery fa na dia efa niezaka nanazava aza ny arkeology dia mbola manana aloka maro izany. Tsaroako ny raiko namaky ny bokin'i Erich Von Däniken, tamin'ny taona 70, ary ny fitiavako ireo tantara ireo ka misy toerana lehibe ato am-poko ho an'i Peroa sy ny zava-mahatalanjona ao aminy.
The Nazca Lines Izy ireo dia geoglyphs, sary amin'ny tany, tena antitra. Ny kolontsaina Nazca no nanaovana azy ireo ary mamorona vondrona olona an-jatony maro izy ireo, tsotra sy be pitsiny. Izy ireo dia Lova manerantany ary iray amin'ireo toeran-kaleha izay tsy maintsy isalasalana fa ny fandehananao any Peroa.
1 Ny mampiavaka ny tsipika Nazca
2 Tsidiho ny Nazca Lines
3 Torohevitra hitsidihana ny Nazca Lines
4 Inona koa no hitsidika an'i Nazca
Ny mampiavaka ny tsipika Nazca
Ny Nazca Lines dia tsipika nisesy tamin'ny fiezahana tamina tany iray misy tany mena sy mainty. Manitatra mihoatra ny 500 kilometatra toradroa ny velaranyhey are hita 450 kilometatra miala an'i Lima, ny renivohitra Peroviana, any amin'ny tanin'ny Nazca, Palpa, Socos ary Ingenios. Tsy mitovy ny halavan'ireo andalana ary ny lava indrindra dia mety hahatratra 275 metatra. Misy tsipika sy tarehimarika maneho ny biby, labyrint, olombelona, ​​zavamaniry ary na dia sary geometrika aza.
ny tarehimarika malaza indrindra an'ny Nazca Lines dia an'ny an'ny biby: misy a Trozona 27 metatra, iray crane, una voromahery, ny malaza spider, ny sasany akoho amam-borona 200 metatra ny halavany, ny sasany biby mandady. Ny sary dia eo amin'ny faritra fisaka sy amin'ny tehezan-tendrombohitra ary rehefa jerena tsara dia miavaka fa amin'ny tehezan-tendrombohitra no tena izy tarehin'olombelona ary na dia eo aza ny zava-misy fa maro amin'ireo tarehimarika dia azo fantarina dia manana fanampiana fanampiny izay ny tena dikany dia vinavina fotsiny.
Amin'ny Nazca Lines ihany koa mbola maro ny sary geometrika noho ny an'ny biby sy ny olona. An-jatony sy an-jatony tsipika, spirals, triangles ary efamira izay tsy milentika mihoatra ny 30 santimetatra amin'ny tany ny tsipika azony, saingy noho ny toetr'andro miavaka amin'ity faritra ao Però ity dia mijanona izy ireo. Tsy orana mihitsy! Ho fanampin'izany, ny tany dia manana plaster maro sy ny toetrandro mafana, ny mari-pana amin'ny taona dia 25 ºC, mahatonga ny rivotra mafana ho toy ny ondana ary manakana, miaraka amin'ireo anton-javatra hafa, ny famafana ireo tsipika.
Tsidiho ny Nazca Lines
Nilaza izahay etsy ambony fa ny Nazca Lines dia efa ho 500 kilometatra miala an'i Lima ary mihevitra fa misy harena hafa ao amin'ny firenena, dia tsy maintsy alamina ny zotra. Safidy iray ny manakarama a fitsangatsanganana misy ny famindrana sy ny sidina mahaliana eny an-tsisin-dalana, mazava ho azy. Betsaka ny masoivoho fizahan-tany manolotra fitsangantsanganana mitovy amin'izany.
Tolotra iray azo atao, avy amin'ny Visit Peru, ohatra, maharitra roa andro sy iray alina ary ao anatin'izany Tsipika Nazca sy Paracas. Andro voalohany hamindrana anao avy any Lima mankany amin'ny seranam-piaramanidina Nazca eo an-toerana mba hisidina ambonin'ny tany, raha tsara ny andro. Ny alina dia lany ao amin'ny Posada del Emancipador mahavariana ary ny ampitso dia mankeny Paracas izahay ary miainga avy eo amin'ny seranana. mitsidika ny Nosy Ballestas amina sambo adiny roa. Any no misy ny Reserve Reserve, toerana fialokalofan'ny biby sy morontsiraka misy vorona mpifindra monina an'arivony. Ary amin'ny dia, eo amoron'ny morontsiraka no ahitanao ny Candelabro, iray amin'ireo geoglyph Peroviana fanta-daza indrindra.
Agence iray hafa dia Nazca Flight. Samy hafa ny tolotra sidina mihoatra an'i Nazca avy any Pisco, Nazca ary Ica. Soso-kevitra ny hamandrika hatramin'ny iray volana mialoha mba hahazoana antoka ny toerana misy anao, indrindra raha liana amin'ny sidina avy any Ica sy Pisco ianao, izay ireo no be mpitady indrindra. Avy amin'ny Nazca, misy ny fisian'ny sidina bebe kokoa. Ahoana ireo fitsidihana ireo? Manodidina ny 100 euro eo ho eo ianao manana sidina 35 minitra ambonin'ny Nazca Lines ary hitanao ny roa ambin'ny folo amin'ireo andalana eo anelanelan'ny hala, ny antsantsa, ny trozona, ny hazo ary ilay mpanamory sambondanitra malaza. Maka anao any amin'ny hotely any Nazca na any amin'ny gara. Ny sidina dia ao anaty Cessna 206 ary ny saran-dàlana dia misy ny hetra 10 na 11 euro amin'ny seranam-piaramanidina.
Un fitsidihana an'i Nazca sy Palpa lafo kokoa io ary manodidina ny 200 euro. Ny sidina dia mihoatra ny Nazca Lines ary ny zotra Palpa vao hita sy ny Ranon-drano Cantalloc. Ny sidina dia 55 minitra ao anaty Cessna 206 ary amin'ny tranga misy lakandrano dia mitsidika azy ireo avy amin'ny tany izy ireo. Ary ny tolotra fitsangatsanganana any Nazca dia mitohy amin'ny fiaingan'ny Pisco sy Ica miaraka amin'ny taha 290 euro sy 270 euro.
Torohevitra hitsidihana ny Nazca Lines
Afaka misoratra anarana amin'ny fitsidihana foana ianao ary raha tsy afaka manofa fiara ary mampifandray an'i Lima amin'ny tanànan'ny Nazca ary manakarama iray amin'ireo sidina nolazaiko tetsy ambony ireo. Azo atao mivantana avy any Lima na mandehana any Nazca amin'ny bus ary manaova toy izany koa. Manodidina ny adiny valo ny bus. Azonao atao ihany koa ny mandeha avy any Lima mankany Ica amin'ny dia fohy kokoa ary manidina avy any Ica. Raha tsy manam-potoana firy ianao, ity toro-lalana ity dia tsara ary ampio ny fitsidihana ny Nosy Ballestas, ny oasis Huacachina ary ny sasany amin'ireo orinasa famokarana divay eo an-toerana.
Avy any Cusco dia afaka mandeha any Nazca koa ianao ary mitovy amin'ny Paracas sy Huacachina. Misy bisy hop-on, hop-off izay mamela anao hidina sy hivoaka amin'ny toerana maro ary afaka mampiditra hotely sy trano fandraisam-bahiny amin'ny taha ianao. Ankoatra ny sidina mankany Nazca dia azonao atao ny manatona, amin'ny alàlan'ny tany, ny Nazca Lines Viewpoint amin'ny làlan'ny Pan-American. Tsy manome anao ny fomba fijery tsara indrindra ho an'ny rehetra, andalana vitsivitsy fotsiny, fa raha mandeha fotoana fohy alohan'ny filentehan'ny masoandro ianao dia carte postale tsara tarehy.
Inona koa no hitsidika an'i Nazca
Ary inona koa no azontsika atao ao Nazca? Nazca dia tsy tanàna lehibe loatra ka afaka mijery azy an-tongotra mora foana isika. Anisan'ireo toerana fizahan-tany hafa azontsika aleha foana Maria Reiche Observatory izay miasa ao amin'ny Hotel Nazca Lines, trano taloha an'ny arkeology Reiche izay nandalina ireo tsipika miafina ireo nandritra ny am-polony taona maro.
Azonao atao ihany koa tsidiho ny Fasan'i Chauchilla, eo ivelan'ny tanàna, an'ny kolotsaina talohan'ny Inca, ary koa ny Lakandrano Nazca izany dia mbola miasa mandritra ny taonjato maro. ny Lakan-drano Cantalloc Dimy kilaometatra monja avy eo amin'ny tanàna izy, 15 minitra, asa fisoratam-bato sy hazo mahavariana izay mendrika ho fantatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Ny Nazca Lines, harena any Peroa
Vinicunca dia hoy izy:
Ny Nazca Lines, iray amin'ireo toerana fizahan-tany lehibe any Peroa. Tsy isalasalana fa isaky ny vazan-tanin'i Peroa ianao dia hahita zava-baovao ankafizina. Ohatra, ao Arequipa ny lohasaha colca misy azy, Huus Cusco (Machu Picchu, Lohasaha Masina an'ny Incas, Mountain of the 7 Colors na Vinicunca, Humantay lagoon), Puno (Lake Titicaca, Chulpas del Sillustani) Huuf miaraka amin'ny maro hafa.
Tsy misy isalasalana fa manolotra fitsangatsanganana fizahan-tany tanteraka i Però, indrindra ny mpitsangatsangana.
Valiny tamin'i Vinicunca
Choquequirao Trek dia hoy izy:
Ny Nazca Lines dia olona miafina voasintona any an'efitra. Izy io dia iray amin'ireo enigma arkeolojika lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Andalana mahafinaritra misy tarehimarika marobe sy làlan'ny fahalavorariana mahatalanjona noforonin'i Nazcas. Ary koa io toerana itodiana io dia misy toerana maro azo tsidihina toa an'i: Machu Picchu, Choquequirao, zava-manintona voajanahary toa an'i Vinicunca (Mountain of 7 Colours (), Humantay (the Turquoise Lagoon), miaraka amin'ireo toerana manintona maro hafa.
Miarahaba anao Miguel.
Valio ny Choquequirao Trek
Rehefa tonga ao Santiago de Compostela ireo mpivahiny
Costa Rica, paradisa voajanahary ho hita